Etu esi wụnye Office Online na Ubuntu 16.04 | Site na Linux
Ọtụtụ ndị ọrụ na- wepu site na Windows gaa Linux ejighi eji nchịkọta ụlọ ọrụ n'efu dị taa, ọ bụ ezie na enwere nnukwu ụzọ ndị ọzọ Office Ọtụtụ nde ndị ọrụ ka na-eji nke a eme ihe. Aysbọchị gara aga, ha degaara anyị akwụkwọ na-ajụ ha etu ha ga-esi mee wụnye Office Online na Ubuntu 16.04 ya mere, anyị gawara ịchọta ụzọ kachasị mfe ma kachasị ọsọ iji mee ya.
Ihe nkuzi a ga - enyere anyị aka ịwụnye Office Online na Ubuntu 16.04 na na distros ewepụtara, na-akpaghị aka yana ihe niile dị mkpa, ekele maka edemede magburu onwe ya nke nwere usoro dị mkpa maka Office Online iji rụọ ọrụ zuru oke.
Nzọụkwụ iji wụnye Office Online na Ubuntu 16.04
Usoro a nwere ike ịdịru ọtụtụ awa, yabụ ọ ga-adị mma ma ị were usoro ọzọ ma ọ bụrụ na nhazi gị adịghị ike
Usoro nrụnye Office Online n'iji edemede a nwere ike ịdị nwayọ nwayọ, yabụ atụla ụjọ ma ọ bụrụ na nrụnye na-ewe ogologo oge.
Ihe mbụ anyị kwesịrị ime bụ mmepụta oyiri onye ọrụ edemede
Ọzọ anyị na-aga ọhụrụ cloned ndekọ na e kpere .sh ka sudo
Ozugbo edemede gwụchara, anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ngwa niile nke Office Online Suite, usoro a dị mfe ma ọ bụrụ na ịdọ aka na ntị ụfọdụ apụta, anyị nwere ike ileghara ha anya ebe ha bụ ụfọdụ ngwugwu enwere ike ịhapụ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ inye ọrụ ahụ, onye edemede nke edemede a na-agwa anyị na anyị nwere ike iji ya sistemu:
Yabụ site na ngwọta a dị mfe anyị nwere ike iji ụlọ ọrụ Office Office.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Etu esi wụnye Office Online na Ubuntu 16.04
ọbụghị na imeghe office.com site na ihe nchọgharị ma kwụsị?
Ọ dị mma, enwere ndị na-achọ ka etinyere ọfịs ha na sistemụ arụmọrụ yana maka ha, ọ na-adị ha ka ọ dị adị n'ezie karịa ịmepe ya na ihe nchọgharị
Nke a bụ iji wụnye libreoffice n'ịntanetị; S
Ọ bụghị microsoft office online, ma libreoffice online. Olee iwepụ?
Enwere m xubuntu 16.04 ọ naghị arụ ọrụ m.
Zaghachi Alvaro Rodriguez
Aga m agwa gị na m nwara ịwụnye ya na igwe arụmọrụ na Ubuntu 16.04. Amaghị m oge ole nrụnye nwere ike ime, mana ọ nwere ike ịbụ karịa ọkara elekere ... ọ na-aga n'ihu ...
Amaghị m ihe nsonaazụ ikpeazụ ga - abụ, mana m ga - akwado Lagarto ka m nye ndụmọdụ banyere obere nkọwa ndị a n’isiokwu ndị dị ka nke a ... onye ọ maara na Linux maka oge nrụnye ezi uche dị na ya ma, ọ dịkarịrị obere karịa nke a, yana, ọ bụrụ na ọ mara , M gaara ahapụ ya maka oge m nwere oge karịa ... n'ihi na nrụnye na-ewe ezigbo iwe!
Na-amara gị ọkwa!
M na-ekwuputa okwu m dere na ederede ahụ n'oge ahụ
"Usoro ntinye ihe n 'ụlọ ọrụ Office site na iji edemede a nwere ike nwayọ nwayọ, yabụ atụla ụjọ ma ọ bụrụ na nrụnye na-ewe ogologo oge."
Echere m na ị chọpụtaghị nkwupụta ahụ egosiri dị ka ozi ederede na koodu ntinye nke ederede n'onwe ya, nke ị nwere ike ịhụ site na nchekwa ha bipụtara n'isiokwu a:
"NKWUKWU AH WILL AH WILL GA-EBU OBI OGO, GHỌ 2-8 (Ọ dabere na ọsọ nke ihe nkesa gị), KP BER BE PBATR P ỌR !!! !!!
Ndị ọzọ okwu, nwụnye nwere ike iri abụọ na asatọ awa. Iwe, ee, ma onye na-adọ aka na ntị abụghị onye sabo 😉
Anaghị m asụ bekee na, agbanyeghị na m nwere ike ịghọta ma tụgharịa asụsụ ederede ị na-ezo aka na ya, anaghị m agakarị ụdị peeji a, ebe anaghị m agụ koodu isi; Abụ m onye ọrụ dị mfe ma achọtara m ya asụsụ mba ọzọ. Nke ahụ bụ, enweghị m ike ile anya na "disclaimer" n'ihi na anaghị m abanye na peeji nke nchekwa, mana agụrụ m isiokwu ahụ, site na onye ederede ya enweghị ike ịkọwapụta na oge nrụnye nwere ike iwe ọtụtụ awa.
Etinyela ịdọ aka na ntị, ka ndị ọrụ n'ọdịnihu ghara inwe nsogbu gbasara oge nrụnye
N'ezie, Lizard, ọ naghị anwa ịme esemokwu. M gụrụ okwu ahụ na nwụnye nwere ike ịdị obere nwayọ, mana ọ nweela ọtụtụ awa ọ gwụbeghị ... ọkara elekere dị ka oge buru ibu iji tozuo nwụnye dị ka nwayọ nwayọ, mana n'oge a ana m echegharị! Ọ na-ewe ihe karịrị awa abụọ, ọ kụọbeghị!
M kwughachiri, anaghị m anwa ịmepụta esemokwu, na ọ na-enwe ekele na ị na-ekerịta ihe ọmụma gị enweghị mmasị, mana otu ihe bụ nwụnye obere nwayọ, na ọzọ bụ ntinye nke ... gafere awa abụọ !!! Ọ bụ ịta ahụhụ! Ma e nweghị ka ihe ịrịba ama na ọ ga-akwụsị!
M na-aza onwe m ka m gwa gị, n'ikpeazụ, aghaghị m ịhapụ ịwụnye Office Online, n'ihi na nrụnye were ogologo oge na m ga-aga ịrụ ọrụ na-ahapụ igwe. Mgbe m hapụrụ, ọ gafeelarị awa atọ. Mgbe m laghachiri, mgbe ihe dị ka awa anọ (ọ ga-abụ asaa, ọ dịkarịa ala) achọtara m mkparịta ụka chọrọ nnabata, anabatala m, mana ọ weghachitere njehie m na-echetaghị na ntinye anaghị agwụ. N'ịbụ onye nwere ọnọdụ dị otú ahụ, ọ dịtụghị n'uche m ịnwale ya ọzọ.
Nkọcha m, nke na-abụghị ihe dị oke njọ, ma ọ bụ na m bu n'obi imekpa onye ọ bụla obi, na-elekwasị anya na ịgbanwe ihe ngosi banyere oge ntinye nke emere n'isiokwu ahụ, bụ nke a na-ekwu na usoro ntinye «nwere ike ịbụ obere nwayọ ”, echekwara m na ọ ga-aka mma igosi ya na ọ nwere ike ịdị ọtụtụ awa.
Maka nke m, ọ bụrụ na m nwere echiche ọjọọ banyere oge nrụnye, agaghị m anwale ya ọ ga-azọpụta m oge na ego na ụgwọ ọkụ eletrik. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, na-eburu n'uche na anyị na-ekwu maka ọtụtụ awa nke nrụnye, echere m na ọ bụ ihe ziri ezi ịkọwa na isiokwu ahụ dọrọ ya aka ná ntị nke ọma.
N’ụzọ doro anya, ee, ọ bụ onye ode akwụkwọ ga-enyocha ya, ngosipụta doro anya gaara echekwa m ọtụtụ oge.
Microsoft Office ọ bụ ihe ị wụnye? Kedu ka akwụkwọ ikike ahụ si arụ ọrụ?
Ọ na-atọ ọchị ịhụ na ha na-aga Linux n'ihi na ha kpọrọ ihe niile na-esi ísì ụtọ asị Microsoft, na ihe mbụ ha na-achọ n'ime Linux bụ ihe nzuzu ndị a na otu esi etinye Wine, playonlinux, mebere igwe na ihe oyiyi Windows, ya bụ, ha chọrọ ka distro ha gbaa ọsọ niile nke MS.
Ọ bụghị anyị niile mere mgbanwe a ka anyị dị otu a. N'ihe m, n'ihi ọrụ, enweghị m ike ịkwụsị iji ụlọ ọrụ microsoft. Ọzọkwa, Achọrọ m iji mmemme ndị ọzọ enweghị ụdị nsụgharị ndị ọzọ n'efu ma ọ bụ, ọ bụrụ na ha emee, ha adịghị mma dịka ibe ha. Na mgbakwunye, enwere nsogbu nke iwepụta faịlụ dakọtara na enwere ike dezie ha na kọmpụta dị iche iche. Ọ bụ n'ihi okwukwe ya, mana a na-etinye mgbalị. Kama ịkparị, mụta ma ghọta.
enweghị m ike:
"Officeonline-install.sh: 293: officeonline-install.sh: Syntax error: redirection na-atụghị anya ya"
ị ga-eji # sudo ./officeonline-install.sh
Etu esi ewepu ihe a? kedu ka m ga-esi ehichapụ onye ọrụ lool
Agam esonye n’aju gi ... kedu ka esi etinye ya?
Nhazi netwọk na njikwa - Neti Ntanetị